Isiokwu a na-akpọ “anọgidewokwa na-anyụ heroines: ndị inyom na-edu ndú na egwu nkiri ndị” e dere site Joana Benecke, n'ihi na theguardian.com on Thursday 23 October 2014 09.08 UTC
dị ka 31 October-eru nso, fim ụwa ekewa abụọ: ndị na-amasị iju-anya na fim, na ndị na-adịghị. M ugboro ugboro na-anụ ndị na-ahiri katọọ ndị genre ka na-akwalite ime ihe ike na nwoke chauvinism. Nkebi okwu bụ "osisi ịta porn" na-fọrọ nke nta invariably eji, ke banyere ụlọ mbikọ na hụrụ franchises. Kere ma ọ bụrụ otu generalizations e mere banyere ndị ọzọ Genres? "M wee nụ Diana bụ egwu mere enweghị ihe m na-ele ibe ejije." "The ụgbọala na-adọkpụ maka Ka-Cops anya ọjọọ otú m na-enye elu on ntochi ihe ọma."
Horror movies, dị ka ihe niile na fim, abata a dịgasị iche iche nke ekwekọghị, site n'afọ iri na ụma slashers ka Halloween, Chịa na Sorority Ahịrị, ka ihe ọjọọ ndị ọzọ-free psychological chillers ka Diabolique, The haunting, Rosemary si Baby, The ndị ọzọ, na The Ring. Ihe niile na fim m na-depụtara na-nwekọrọ, Otú ọ dị, bụ ha Central nwanyi protagonists. Ihe bụ ihe ọzọ, ha nile gafere Bechdel Test.
N'ezie, iju-anya bụ mfe genre nke ịchọta ndị inyom na-eduga. ma ọ dighi, a na fim na-adịghị niile banyere "ụfọdụ nnukwu-breasted nwa agbọghọ na-apụghị ime ihe na-na-mgbe na-agba ọsọ n'elu akwa mgbago mgbe ọ ga-agba si n'ihu ọnụ ụzọ", dị ka Neve Campbell si Sydney Prescott aro ke akpa Chịa nkiri.
Ginger Snaps ... a film banyere nwanna nwanyị bụ ịhụnanya na iri na ụma werewolves
Teen werewolf kpatụ aka gaa na Ginger Snaps (2000) ihe nile elu a nkiri banyere nwanna nwanyị bụ ịhụnanya; The ụmụ (2005) - Ihe niile na-girl njem na njem tụgharịa nro - awade a eziokwu anya nwanyi enyi nrụgide; ezé (2007), a film banyere ikpu dentata, bụ a amamiihe nyochaa a girl ọgụ azụ megide n'ụzọ mmekọahụ; Mama (2013) bụ ihe ngagharị nne nwa ịhụnanya na ịzụlite ụmụaka (na ghosts); na Lyle (2014) - A nwanyị nwere mmasị nwanyị Rosemary si Baby - nkà rụsie na-egosi otú ọchịchọ nwere ike imebi a ezinụlọ.
Nke a Halloween, onye so dee / director Jennifer Kent si feature mpụta mbụ The Babadook emepe na UK. Ostensibly a film banyere otu nne nke na obere nwa okụt a na- atụ egwu picture akwụkwọ jupụtara horrid amụma na-amalite ịbịa ezi; ihe nkiri bụ otu n'ime ndị kasị mma explorations nke iru újú, owu na-ama, naanị nne ịma aka na nne na nna ikpe ọmụma m na hụrụ. Dubbed a nwaanyị na-egbuke, vidio ahụ na-anwa anwa ịchọpụta ihe ndị kasị taboo niile: a nne mmetụta ịkpọasị n'ebe nwa ya. Ndị na mwute gag-aghọ nkọ nwere ike zuru ike, dị ka ihe ọjọọ ndị ọzọ na-akpata bụ ala. Otú ọ dị, ị ga-ahụ nseta nke a Bechdel-agafe ọdịdị ndị pụrụ iche na mainstream sinima (mgbe ikpeazụ ị na-ele a n'etiti-agadi na nne listlessly iru n'ime ya ji akwa ákwà igbe ịchọta ya vibrator?)
Peter Bradshaw on mere i kwesịrị ile The Babadook
Na DVD n'ihu, gị girl-ike mkpa a na-elekọta site na ntọhapụ nke kechioma McKee na Chris Sivertson si cheerleader-zombie-amoosu kpatụ aka gaa All Cheerleaders Anwụ. Onye ọ bụla maara na McKee si oeuvre ga-amarakwa na ọ chọrọ ya ihe ọjọọ ndị ọzọ (ma na-eme ya nke ọma), ma ọ bụ na-ahụ maka ndị kasị feminist cinematic akụkọ nke na-adịbeghị anya: Nwere ike, The n'ọhịa, The Woman, na now Cheerleaders. Niile na fim center on nwaanyị mmekọrịta, ọtụtụ nwere Central (na mberede) nwanyị nwere mmasị nwanyị odide, na a mata inequality nke sexes. Ọ bụ ihe simplistic bụrụ na nke girl = mma, nwa na-enweghị = ọjọọ; e nwere n'ezie despicable nwoke odide, kamakwa egwu, mkpari nwanyị.
Easy azịza na-adịghị ihe na-enye; McKee Fim pụrụ ịdị ka fechaa slashers - na ha bụ, n'ezie, ngwa-ngwa paced na kemmeochi na catchy soundtracks - ma ọkọ ndị garish pop-omenala elu ma ị ga-ahụ a radikal okike alụso ọrịa na-arụ ọrụ. McKee onwe ya agwa m, "Ụfọdụ ndị na-ẹsịn [Cheerleaders], karịsịa ụmụ okorobịa ndị na-ewere ya na ọ dịkarịa ala otu n'ime ụmụ nwoke na nkiri na-aga jikwaa ime ka ịkpa ike. "
Na ọtụtụ nke dịkọrọ ndụ sinima mmetụta unexciting na retrogressive, gịnị mere na-eme ka a na Halloween mgbe ị aka gị echiche na-enye egwu a ohere? Ị nwere ike na-eche banyere ya dị ka "nkà ụlọ", "Thriller" ma ọ bụ "nọọrọ onwe ha" ma ọ bụrụ na ọ na-eme obi ruo gị ala.